ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ခွပ်ဒေါင်းပါ ဆိုနေမှ…”
ခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ် ဒေါင်းခွပ်တာ... :)
ဗီဒီယိုထဲမှာ ဒေါင်းအော်သံလည်း ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော့်နားထဲမှာတော့ “အိုးဝေ၊ အိုးဝေ” လို့ မကြားမိဘူး။ “ညှောင်း…ညှောင်း…” လို့ ကြားမိတယ်ခင်ဗျာ။
But one question too.
What animal is't? အောင်း...အောင်း အော်တာ
သတိပေးထားပါလျက်နှင့် ဖတ်ပြီး ကျိတ်မနိုင် ခဲမရ ဖြစ်ကြပါက မိမိတို့ တပ်မတော်အစိုးရအနေဖြင့်....အဲလေ... ဤဘလော့ဂါအနေဖြင့် တာဝန်မယူနိုင်ပါကြောင်း....အောင်း...အောင်း.....း-)
ကျွန်မကတော့ ဒါကို ခွပ်နေတယ်လို့ မမြင်ဘူး ကစားနေတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
အသံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာက ဥသြငှက်ရဲ့ အသံကို မြန်မာပြည်အပေါ်ပိုင်းက လူတွေက ဥသြ လို့ကြားပေမယ့် ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းက လူတွေနဲ့ ကရင်၊ မွန် တိုင်းရင်းသားတွေက တူ..၀ူး လို့ကြားတယ်။ သေနတ်သံကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ဒိုင်း ဒိုင်း လို့ကြားပေမယ့် အင်္ဂလိပ်တွေက ဘန်း ဘန်း လို့ ကြားတယ်။ နွားအော်တာကို အတော်များများက ဘွတ်အဲ လို့ ကြားတယ်လို့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ နယ်ကလူတွေက အောင်ပန်း လို့ပဲကြားတယ်။ ကြက်တွန်သံကို မြန်မာတွေက အောက်အီအီးအွတ် လို့ ကြားတယ် ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားတွေက အဲဒီအသံနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ အသံကို ကြားတယ်။ ဒါကြာင့် အသံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိုးဝေပဲ ကြားကြား ညောင်ပဲ ကြားကြား ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာ ပြောလို့မရဘူး။ ကြားတဲ့သူ နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။
ခွပ်ဒေါင်းရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာက ကျွန်မ ဖတ်တော့မဖတ်ဖူးဘူး ကြားဖူးနားဝရှိတာနဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ စစ်သင်တန်း တက်တုန်းက သင်တန်းမှာတော့ သင်ဖူးတာပဲ သိပါတယ်။
ခွပ်ဒေါင်းနဲ့ ကဒေါင်းနှစ်မျိုး မတူဘူး။ ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ အချုပ်အချယ်ကို လုံးဝမကြိုက်လို့ လွတ်လပ်မှုအတွက် အမြဲတမ်း ရုန်းထွက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝ ရှိတယ်။ ဒီပို့စ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းတွေ အပါအ၀င် ခွပ်ရင် ဘယ်တော့မှမနားဘူး အောင်ပွဲရတဲ့အထိ ခွပ်တယ်။ အမွေးအမျှင် တပင်မှ မကျန်တဲ့အထိ မရပ်ပဲခွပ်ပြီး နိုင်မှ ဒါမှမဟုတ် သေမှပဲ ရပ်တယ်တယ်။ အဲဒီသင်္ကေတတွေကို အကြောင်းပြုပြီး အဲဒီလို စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ခွပ်ဒေါင်းလို့ ခေါ်တာ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေယ့် ဒီမတိုင်ခင်ကတောင် ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ သတ္တိရှိရှိတယ် ဆိုတာ Common Sense အနေနဲ့ ကျွန်မ သိထားပါတယ်။ အခုမှ မဆလ နအဖကို တော်လှန်မှ စပြီးတင်စားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဗြိတိသျှလက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လက်ထက်ကတောင် တင်စားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်က ဂျပန်အကူအညီနဲ့ မြန်မာပြည်ကို သိမ်းတဲ့အချိန်မှာ ဒေါင်းအလံကိုလွှင့်ပြီး ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မက ဒါကို Common Sense အနေနဲ့ လူတိုင်းသိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မ အလုပ်များလို့ အခုတလော စာလိုက်မဖတ်ဖြစ်ဘူး စာလုပ်ရင်း နည်းနည်း ပင်ပမ်းလာလို့ ဒီပို့စ်ကို ၀င်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုပေါပို့စ်တွေ အတော်များများကို တွေးခေါ်မြော်မြင် သုံးသပ်ပြီး ရေးထားတာလေးတွေများလို့ ကျွန်မ သိပ်ပြီး ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေယ့် ကိုပေါက ဒီပို့စ်ကိုတော့ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးမှန်းတော့ မသိဘူး စိတ်ထဲမှာ တမျိုးခံစားရတယ်။ သေချာတာက ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ ကျောင်းသားတွေအတွက်မှ မဟုတ်ဘူး မြန်မာ တမျိုးသားလုံးအတွက် အထွတ်အမြတ်ထားစရာ ငှက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သရော်စရာ ရီစရာနောက်စရာ ပြောင်စရာလို့ ကျွန်မ မထင်ဘူး။ ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ Icon တွေကိုသိအောင်လေ့လာပြီး တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ သိပ်ကို လိုအပ်နေတယ် ထင်တယ်။
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ဗိုလ်မင်းဂေါင် ရဲ့ စာအုပ်ရယ်..
တွေ(၁၉၈၅ ခန်.ကမြဝတီမဂ္ဂဇင်း)ရယ်မှာ BIA ဖွဲ့တော့အလံတွေရွေးတော့ ပထမတော့ ခွပ်ဒေါင်းရွေး
ဘဲရွေးခဲ့ပါတယ်..တပ်မဟာ ၂ လို.ထင်တယ်အလံ
ကဒေါင်းပါ.ငွေဒင်္ဂါး တွေလဲ ကဒေါင်းပါ.သင်္ကေတ
အဓိပ္ပါယ်ယူတာ.မတုလို့ဗိုလ်ချုပ်ကဆုံးဖြတ်
်ခဲ့ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း တံဆိပ်ကတော့
ခွပ်ဒေါင်းလို့ ထင်တယ်..ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တံဆိပ်
ဂျပန်ခေတ်တံဆိပ်ခေါင်းတွေက ကဒေါင်းနဲ့ ဂျော့ဘုရင်
ခွပ်ဒေါင်း သင်္ကေတ လည်းယူဆချက်ကောင်း
အဲဒီထဲ ကဒေါင်းတွေက မိတ်လိုက်နေကြတာလား?
တိရိစ္ဆာန်ဒေါင်းကတော့ ခွပ်ဒေါင်းဟုတ်ချင်ဟုတ်လိမ့်မယ် ။အွန်လိုင်းမှာနဲ့ အပြင်မှာတော့ ခွက်ဒေါင်းတွေ ပိုများတယ်ဗျ ။ ခွက်လက်စွဲကာ ဒေါင်းယောင်ဆောင်ပြီးတောင်းရမ်းစားသောက်သူတွေ ပေါ့ဗျာ ။ ဟဲဟဲ
ခွပ်ဒေါင်းတွေ ခွပ်လား မခွပ်လား မသိပါဘူး ဆရာတို့ရယ်၊ ဥရောပကိုရောက်နေတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းလို့ ပြောပြောနေတဲ့ ဒေသစွဲကြီးတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းတွေ နိုင်ငံရေးလုံးဝ မလုပ်ပဲ ပိုက်ဆံတွေပဲ ရှာနေကြပါတယ်။
ဥရောပမှာ အင်္ဂလန်ကလွှဲရင် ဗမာအများစု ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖင်လန်၊ ဆွီဒင်၊ နော်ဝေးလ်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဂျာမဏီ၊ နယ်သာလန်မှာ နေတဲ့ ခွပ်ဒေါင်း အဟောင်းတွေ ဒေါ်စုမွေးနေ့၊ ရှစ်လေးလုံးနေ့ စတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အခမ်းအနားတွေတောင် လုပ်ဖြစ်တယ်လို့
မကြားရတာ ၃-နှစ် နီးပါး ရှိပါပြီဗျာ၊ ပြောကြပါအုံး။
ခွပ်ဒေါင်းတွေ နိုင်အောင် မခွပ်နိုင်လို့ မြန်မာပြည် စစ်ကျွန်ဖြစ်နေတာပေါ့၊ ဒီတိရစ္ဆာန် သင်္ကေတတွေ ဖျက်သိမ်းသင့်ပါပြီ။
ရှေ့ဆက်ခွပ်နိုင်ဖို့ဆို Money လည်းလိုတယ်။ ဝါသနာပါသူများအတွက်ပါ၊ ကျွန်တော်သွားနေကျ Blog လေး။
http://aunginvestment.blogspot.com တဲ့. Investment နဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးထားတဲ့ posts တွေပါ။
တော်သေးတာပေါ့ ကိုပေါ ယူကျူ့မှာ ခွပ်တာတွေ့ရသေးလို့..ဒါပေမဲ့ခွပ်တော့ ခွပ်တယ်ဗျ
နို့မို့ ဆိပ်ဒေါင်းတို့ ခွက်ဒေါင်းတို့ ပြေးဒေါင်းတို့ပြောင်းခေါ်
နှစ်ကောင်ထဲရှိတာတောင် ခွပ် သေးတယ် ပြီးတော့ခွဲလည်း မနေနိူင်ဘူး..ကျနော်တို့ရဲ့ဂီဆောင်ကျောင်း ခွပ်ဒေါင်းတွေလည်း အဝေးကြီးနေလှမ်းခွပ်ပါရဲ့ တချိူ့လည်း ၂၀၁၀ လေလည်ပြရုံရှိ
သေးအမြီးလေးတနှံနှံနဲ့ ၁၉၉၀ မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုမှ အားမနာ ကျဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုမှမျက်နှာမထောက် ခွေးဒေါင်းလည်း လုပ်ချင်နေကြသေးသဗျ...ခက်ပါရဲ့ဗျာ..အဲ့ကျနော်လည်းအမှန်တွေပြောမိလို့ အခွပ်ခံရမှာကြောက်လို့ နာမည်ဖျောက်ထားရတယ်ဗျာ..